Feiliyundi Ny Foibe Fivarotana - Famolavolana
Ny Foibe Fivarotana
Alahady 1 Aogositra 2021
Ny Foibe Fivarotana Ny asa fanamboarana tsara dia manaitra ny fihetsiky ny olona. Ny mpamorona dia mitsambikina ao amin'ny fitadidiana ny fomba nentim-paharazana ary mametraka traikefa vaovao amin'ny firafitry ny habaka mahafinaritra sy futuristic. Efitrano fanandramana tontolo iainana miramirana dia namboarina tamin'ny fametrahana tamim-pitandremana ny fametrahana ny kanto, hetsika mazava tsara ny habaka sy ny haingon-trano vita amin'ny fitaovana sy ny loko. Tsy fiverenana amin'ny natiora ihany ny fahatongavana ao, fa tena fitsidihana mahasoa koa.
Anaran'ny tetikasa : Feiliyundi, Anaran'ny mpamorona : Weimo Feng, Anaran'ny mpanjifa : MOD.
Zoma 30 Jolay 2021
Ny Foibe Fivarotana Weimo Feng Feiliyundi